'परिवारलाई उनीहरूकै आस थियो, टिपरले मार्दियो' :: Setopati
'परिवारलाई उनीहरूकै आस थियो, टिपरले मार्दियो'
समिक्षा अधिकारी काठमाडाैं, माघ २४
बुधबार रातको १२ बजे आसपास। कलंकी मुख्य चोकमा गाडीका घाइँघुइँ अलिअलि थियो। यो घाइँघुइँ छिचोलेर एक्कासि ड्याम्म ठूलो आवाज आयो। खसीबजार छेउका प्रहरीहरू के भयो भन्दै कलंकीतिरै दौडिए।
कलंकीको पोहोर मात्र उद्घाटन भएको अन्डरपास मुनि पुग्दा दृश्य भयानक थियो। एउटा मोटसाइकल जलिरहेको। छेउमा दुई युवा सडकमा अचेत। आगोले उनीहरूलाई पनि भेटेको थियो।
प्रहरीले हत्तपत्त पानी हालेर दुई जना युवाको ज्याकेटमा सल्केको आगो निभाए। अचेत अवस्थामा रहेका उनीहरूलाई प्रहरीले सहिद मेमोरियल अस्पताल पुर्‍यायो। अस्पतालले उपचार गर्न नसक्ने बताएपछि टिचिङ अस्पताल, महाराजगन्ज पुर्‍याए। तर त्यहाँ पुर्‍याउनु अगाडि नै उनीहरूको ज्यान गइसकेको थियो।
टिचिङका डाक्टरले तत्कालै मृत घोषणा गरे।
सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने ती दुई जना थिए रौतहटका २४ वर्षीय मुन्ना चौधरी र १९ वर्षीय राजेश चौधरी। प्रहरीका अनुसार कलंकीको अन्डरपासमुनि विपरीत दिशातिरबाट आइरहेको टिपरले उनीहरूले चलाएको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएर भागेको थियो।
मुन्ना र राजेश रगताम्य अवस्थामा फेला परेका थिए। ठक्कर दिने टिपरको अत्तोपत्तो थिएन। बिहीबार तीन बजेतिर बल्ल नख्खुमा भेटियो। नख्खु पुलवारि रहेको चन्द्र-सूर्य ग्यारेजमा लुकाएर राखेको अवस्थामा टिपर फेला परेको काठमाडौं महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता डिएसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए।
दुर्घटनामा परेका मुन्ना रौतहट कटहरि गाउँपालिका ७ र राजेश कटहरि गाउँपालिका ४ का बासिन्दा हुन्।
मुन्ना पाँच वर्षदेखि काठमाडौंमा संघर्ष गर्दै थिए। बिहान सबेरै ग्यारेज पुग्थे। दिनभर काममा व्यस्त हुन्थे। कहिले फिल्ड, कहिले ग्यारेजमै बिग्रिएका गाडीहरू मर्मत गर्थे। ठीकठाक बनाउँथे। कहिले बस, कहिले माइक्रो, कहिले टिपर पनि मर्मत गर्थे।
बुधबार पनि उनी ग्यारेजमा काम गरेर दुई दिनअघि मात्र काठमाडौं आएका उनका साथी राजेश चौधरीसँग मध्यरातमा कोठा फर्किँदै थिए। राजेशले चलाएको मोटरसाइकललाई टिपरले हान्यो।
उनीहरूको सहयात्रा त्यही बेला सदाको निम्ति सकियो।
मुन्ना र राजेशको शव टिचिङको शवघरमा राखिएको छ।
दोषीलाई कडा कारबाही र क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुन्ना र राजेशका आफन्त र साथीहरू दिनभर महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालिमाटीमा थिए। त्यही भिडमा एक थिए मुन्नासँगै स्कुल पढेका साथी कविराज चौधरी।
दुवैको परिवारमा अहिले रुवावासी भएको उनैले सुनाए। परिवारको पेट पाल्न काठमाडौंमा मजदुरी गरिरहेको छोरोलाई टिपरले कुल्चिदिएपछि मुन्नाका बुवाका आँखा थामिएका छैनन्। आमाको होस खुलेको छैन। अघिल्लो वर्ष मात्रै भित्र्याएकी मुन्नाकी श्रीमतीको अवस्था झन् दयनीय छ।
प्रहरी वृत्तमा अबेर रातिसम्म पीडित र पीडक पक्षको वार्ता भए पनि कुरा मिलेको थिएन। वार्ता नमिलेकै कारण मुन्ना र राजेशको शवको पोष्टमार्टम पनि भएको छैन।
कुरा मिले पनि पैसासम्म पाउने हो, जीवनकै क्षतिपूर्ति त कहाँ सम्भव छ र!
'हामीले त लास पनि देख्न पाएका छैनौं,' मुन्नाका साथी कविराज भन्दै थिए।
प्रहरीले आधा जलेको मोटरसाइकलको फोटो खिचेको रहेछ। दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकलको तस्बिर हेर्दा पनि उनी अताल्लिन्छन्। दुर्घटनापछि मोटरसाइकलमा आगो लागेको थियो। फलामका पाटपूर्जामात्रै बाँकी छन्। प्लास्टिकका पूर्जा सबै जलेका थिए। मुन्ना र राजेशले लगाएको ज्याकेट पनि आधा जलेको थियो। ह्वारह्वार बल्न थालेको आगो पानी हालेर निभाएको प्रहरीले बताएको छ।
मुन्ना र राजेश चढेको मोटरसाइकल जसमा आगो लागेको थियो। तस्बिर सौजन्यः प्रहरी
'दुर्घटनामा कोही नपरून्, अझ टिपरको त कोही छेऊ नै नपरून्,' उनी भक्कानिँदै थिए, '२० मिटर पर उछिट्याउने गरी ठक्कर दिने टिपरको गति प्रहरीलेसमेत अनुमान गर्न सकेका छैनन्।'
मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको टिपर ३ मिनेटमै एकान्तकुना हुँदै भैंसेपाटी क्षेत्र पुगेको सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको कविराजले सुनाए। स्वयम्भूतिरबाट आएको टिपरले तीनवटा टिपरलाई ओभरटेक गर्दै आएको देखिन्छ।
'टिपर नियन्त्रणमा आयो, चालक अझै फरार छन्। टिपर साहु रामेछापका रहेछन्। उनी पनि प्रहरी कार्यालयमा आएका छैनन्। तेस्रो पक्षलाई चौकी पठाएका रहेछन्,' कविराज बिहीबार हामीसँगको भेटमा गुनासो गर्दै थिए। बिहीबारै राति प्रहरीले टिपर चालक २६ वर्षीय अनिल लामालाई सिन्धुपाल्चोकबाट पक्राउ गरेको छ।
कविराज आफ्ना साथीको अल्पायुमै दर्दनाक मृत्यु भएकोमा छटपटिरहेका थिए। कालिमाटी वृत्तमै भएका एक जना व्यक्ति चिन्तित भएर टोलाएका देखिन्थे। उनी भने कसैसँग बोल्न मानेका थिएनन्।
उनी दुर्घटनामा मृत्यु भएका राजेशका दाजु राजनकुमार रहेछन्।
राजेशलाई परिवारको आर्थिक अवस्थाले पिरोलेको थियो। उनका बुवा माछा बेचेर गुजारा चलाउँछन्। वृद्ध भइसकेकाले टाढाटाढा पुगेर बेच्न सक्दैनन्।
राजेशले घरको अवस्थाका कारण दस कक्षामै पढाइ छाडेर कमाउन विदेश जाने सुरसार कसेका थिए।
'के भन्नु, कमाउने आस त्यही भाइको थियो। बा पनि बूढो भइसक्नुभयो,' राजनकुमारले १९ वर्षे कलिलो भाइ गुमाएको पीडा अलिकति थाम्दै यत्ति भन्न सके।
'यो परिवारलाई उसैको त आस र भर थियो। टिपरले मार्दिइहाल्यो,' प्रहरी कार्यालय परिसरमा भेटिएका राजेशका अर्का आफन्तले भने।
मुन्ना र राजेश चढेको मोटरसाइकल उनीहरूको थिएन। अर्काको मोटरसाइकल चढेर कोठा फर्कंदै गरेकोसम्म बुझिएको छ।
'कसको मोटरसाइकल हो, त्यो पनि खुलेको छैन। क्षतिग्रस्त मोटरसाइकल सद्दे बनाएर बुझाउनुपर्ने होला। गरिब परिवारले कसरी गर्नु?' अर्का आफन्त दुःख बिसाउँदै थिए।
काठमाडौंमा टिपर आतंक बढेपछि बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म चक्रपथ क्षेत्रमा गुडाउन नपाइने नियम छ। तर दुर्घटना कत्ति कम भएको छैन। यो वर्ष उपत्यकामा मात्र नौ जनाले टिपरकै कारण ज्यान गुमाइसकेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांक छ।
'देशैभर टिपरको आतंक छ। भीडभाड हुने काठमाडौंमा त टिपरलाई अझ यमराजसँगै तुलना गर्छन्। आज हाम्रो मान्छेलाई ठक्कर दिएर ज्यान लियो, भोलि कसको पालो हो? सरोकारवालाले विचार गरून्,' साथीको निधनबाट मर्माहत कविराजले भने।
सम्बन्धित भिडिओ - सडकमा टिपर देख्दा नागरिक डराउँछन्
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २४, २०७६, ०५:५१:००